Maitiro ekugovana mapikicha kubva kuDropbox kana Google Drive uchishandisa WhatsApp | IPhone nhau
Maitiro ekugovana mapikicha kubva kuDropbox kana Google Drive uchishandisa WhatsApp
Iyo nyowani WhatsApp yekuvandudza yasvika uye iine iyo yese runyerekupe uye tariro dzataive nadzo munhau dzese dzakange dzasara kumashure (kana kwete) dzinonyangarika. Nekudaro, kunyangwe hazvo mashoma, iwo matsva maficha anovandudza mushandisi ruzivo neWhatsApp zvishoma, kunyangwe hazvo izvo zvinoita sekunge kuita kwese kwekushandisa kuri kuderedzwa nechimwe chikonzero chatisingazive. Nhasi tinokuunzira chidzidzo chekugovana mapikicha kubva kuDropbox kana Google Drive uchishandisa WhatsApp, chimwe chezvinhu zvitsva zvakaiswa neWhatsApp mune yayo runyorwa rwekuchinja kweyekuvandudza kwatakatambira nezuro.
Ndizvozvo, shamwari dzeWhatsApp dzakasiya kumashure kwe "bugfixes" mune mavara madiki kuti vataure pane zvinyorwa zvekuchinja mune yekupedzisira gadziriso kuti vangangove vari kuunza maficha nyowani munyika inonyanya kufarirwa meseji application. Tinokudzidzisa iwe maitiro ekugovana mapikicha kubva kuDropbox kana Google Drive uchishandisa WhatsApp:
Kutanga tichaenda kune yedu yatinofarira gore rekuchengetedza sevhisi, kwatiri isu tinoshandisa Dropbox, yandinoda. Saka tichaenda kumufananidzo watinoda kugovana uye kuvhura.
Kana yangovhurwa, mukona yekumusoro kurudyi tinowana icon «mugove»Yakaunzwa kubva kuIOS 8 muhurongwa hwekushandisa, tinodzvanya.
Pane imwe yakamanikidzwa, mamiriro ezvinyorwa achavhura, isu tinoteerera kumenyu iripazasi kuti tiwane basa «rakavhurika mu ...», bata bata zvekare.
Pakupedzisira, mukati "Vhura mu ..." Imwe pop-up ichavhura, ino nguva isu tichasarudza WhatsApp senzira yekugovana. WhatsApp ichavhurira isu, saka tinosarudza iyo yekuonana uye toigovana nenzira yekutsanya uye yakabatana.
Izvi zviri nyore sei kugovana mapikicha kubva kuGoogle Drive uye Dropbox paWhatsApp, tinovimba iyi dzidziso yakubatsira, kunyangwe chiri chinhu "chiri nyore" kune vanojairika vashandisi veIOS, pamwe vamwe vakasangana nematambudziko kana vanga vasingazive zvitsva basa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekugovana mapikicha kubva kuDropbox kana Google Drive uchishandisa WhatsApp
Apple inoburitsa iOS 9.3 beta 5 yevanogadzira uye pachena. Iyo Apple Penzura inoshandiswa zvakare kufamba
Kuenzanisa: Samsung Galaxy S7 vs iPhone 6s